Basikety – Tournoi Pangalanes 2018 : Hanala vela amin’ny GNBC ny Ascut -
AccueilVaovao SamihafaBasikety – Tournoi Pangalanes 2018 : Hanala vela amin’ny GNBC ny Ascut
Basikety – Tournoi Pangalanes 2018 : Hanala vela amin’ny GNBC ny Ascut
02/03/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Nifarana ny fifanintsanana amin’ny fiadiana ny Tournoi Pangalanes 2018, taranja basikety, sokajy N1A lehilahy. Fifaninanana mizotra amin’izao fotoana izao ao Manakara, faritra Vatovavy Fitovinany.
Voahaja araka izany ny lôjika satria tafakatra hiatrika ireo manasa-dalana avokoa ireo ekipa goavana efatra. Mitarika amin’ny filaharana ankapobeny ny ASCB Boeny arahin’ny GNBC Vakina,karatra eo amin’ny laharana faharoa. Mitana ny laharana fahatelo kosa ny Ascut Atsinanana, ary mitana ny laharana fahefatra farany ny Cosfa Analamanga.
Noho izay indrindra, dia hiverina hifandona indray, eo amin’ny lalao manasa-dalana, ny ekipan’ny Zandarimaria, GNBC, sy ny Ascut. Hanala vela eto ny Ascut izay efa resin’ny GNBC tamin’ny tamin’ny isa mazava, 88 noho 63, teo amin’ny fifanintsanana. Hanarina ny lesoka ry Tolotra sy Lalason ary Did’s sy ny namany avy amin’ny Ascut. Marihina fa tao anatin’ny lalao efatra natrehan’izy ireo teo amin’ny fifanintsanana, fandresena roa sy faharesena roa no azon’ity ekipa sangany avy any Atsinanana ity. Ho an’ny ekipan’ny Zandarimaria indray, dia fandresena telo sy faharesena iray no azon’izy ireo tamin’izany. Hiady araka izany, ny fihaonan’ny roa tonta eo amin’ny lalao manasa-dalana.
Eo amin’ny manasa-dalana ilany indray, ny hiverina hifandona ihany koa ny ASCB sy ny Cosfa. Hitady fandresena hiakarana amin’ny lalao famaranana ny ASCB, izay efa lavon’ny Cosfa tamin’ny isa 83 noho 78 tany amin’ny fifanintsanana.
Ho sarotra ihany ny fandidiana satria ekipa samy manana ny maha izy azy eo amin’ny sokajy N1A avokoa ireo hikatroka ny manasa-dalana amin’ny fiadiana ny Tournoi Pangalanes 2018 ireo. Ekipa efa mifankahalala fomba filalao ihany koa, ary samy mikendry fandresena.
Raha ho an’ny voka-dalao teo amin’ny farany amin’ny fifanintsanana indray, ny Cosfa nandresy ny TMBB tamin’ny moka fohy, 87 noho 86, ary ny ASCB nandavo ny Ascut tamin’ny isa 81 noho 77. Toa ny nanao fanazaran-tena kosa indray ny GNBC rehefa nihaona tamin’ny ekipa voafantin’i Manakara. Montsana tamin’ny isa mavesatra, 103 noho 52, ity ekipa farany sady mpampiantrano ny hetsika ity.
Ankoatra izay, dia noentin’ny mpikarakara, ny kolonely Nicolas Jean-Alex, nitsangatsangana nijery ireo toerana malaza sy manan-tantara tao Manakara kosa ireo ekipa rehetra teo amin’ny taranja basikety omaly, teo amin’ny andro fialan-tsasatra, ary anio kosa ireo ekipa mandray anjara amin’ny taranja beach soccer no hanatanteraka fitsidihana izany toerana izany.
vcvTrest dans Code de répression
Ny alatsinainy lasa teo no nosamborin’ny mpitandron’ny filaminana avy amin’ny zandarimariam-pirenena sampana ady heloka bevava avy ao Sambava ny mpitsara iray sy ny mpamily azy ary ny polisy miisa ro.Ny anton’izany dia ny fisolokiana filazana ...Tohiny
Free Bitcoin Mining: I'm not sure exactly why but this weblog is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem…